Izincwadi ezinhle kakhulu zokunikeza lo Khisimusi, amanoveli obukade uwafuna | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezinhle kakhulu zokunikeza lo Khisimusi
UJuan Ortiz | | Abalobi, Izinhlobo, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama
Izincwadi ezinhle kakhulu ongazinikeza ngoKhisimusi.
Ukunikeza incwadi enhle kuyindlela ehlakaniphile kakhulu yokukhombisa uthando nokwazisa ngothandekayo. Ngaphezu kwalokho, imele isipho sikaKhisimusi esingenakulibaleka, esikwazi ukuhlakulela umcabango womamukeli, ikakhulukazi uma siqukethe indaba egcwele ukusonteka okumangazayo okuqinisekisa ukufundwa okuthokozisayo, okuluthayo nokunomsoco.
Lo mbhalo wethula ukubuyekezwa kwamanoveli ayishumi okumele abonwe ngeSpanishi, izinkomba zazo ngokulandelana kombhali, amashidi ezobuchwepheshe kanye nemininingwane yokuthenga ifakiwe. Imisebenzi ingeyababhali abaqavile njengoDolores Redondo, Carlos Montero, Emilio Bueso noJavier Cercas, ukubala abambalwa. Lezi zihlakaniphi zinomkhuba ofanayo: zikwazile ukweqa ngezimpikiswano ezakhiwe ngesitayela sangempela.
1 I-Terra alta kaJavier Cercas (i-Planeta Award 2019)
1.1 Mayelana noveli
1.2 Umbhali bio
1.3 Izici zencwadi
2 Ubuso basenyakatho benhliziyo (Áncora & Delfin) nguDolores Aredondo
2.1 Mayelana noveli
2.2 I-biography yombhali
2.3 Izici zencwadi
3 Ukuchitha ubugebengu obuphelele: 4 (SinFicción) kaMayka Navarro
3.1 Mayelana noveli
3.2 I-biography yombhali
3.3 Izici zencwadi
4 Ama-Valkyries: The Daughters of the North (Izindaba Ezingokomlando) zika-Iñaki Biggi
4.1 Mayelana noveli
4.3 Izici zencwadi
5 Ama-Strone Aeons (Insomnia) ka-Emilio Bueso
5.1 Mayelana noveli
5.2 Umbhali bio
5.3 Izici zencwadi
6 U-Alegría de Manuel Vilas: Umklomelo wokugcina we-2019 Planeta Award
6.1 Mayelana noveli
6.2 Umbhali bio
6.3 Izici zencwadi
7 Amadodakazi kaKaputeni waseMaría Dueñas (UMtapo Wezincwadi WaseMaría Dueñas)
7.1 Mayelana noveli
7.2 I-biography yombhali
7.3 Izici zomsebenzi
8 Usuku Olunye luka-Angela Becerra Namuhla: Umklomelo kaFernando Lara Novel 2019
8.1 Mayelana noveli
8.2 I-biography yombhali
8.3 Izici zencwadi
9 Okungabonakali ngu-Eloy Moreno (Ink Cloud)
9.1 Mayelana noveli
9.2 Umbhali bio
9.3 Izici zencwadi
10 Ihlathi Liyalazi Igama Lakho ngu-Alaitz Laceaga (Amanoveli Amakhulu)
10.1 Mayelana noveli
10.2 I-biography yombhali
10.3 Izici zencwadi
11 Ngaphandle nguJesús Carrasco (NF Novela)
11.1 Umbhali bio
11.2 Izici zencwadi
12 Isifo osishiya ngoCarlos Montero: Primavera de Novela Award 2016
12.1 Umbhali bio
12.2 Izici zencwadi
I-Terra ephakeme nguJavier Cercas (Umklomelo We-Planeta 2019)
Lolu zungu lwenzeka esifundeni esivame ukuba nokuthula eTerra Alta, esinyakaziswa ubugebengu obubi. Lapho, izidumbu zabanikazi beGráficas Adell (okuyinkampani enkulu kunazo zonke endaweni) zitholakala zingenampilo nezimpawu ezicacile zokuhlukunyezwa okwesabekayo.
Ukuphenya amaqiniso, kuvela uMelchor Marín, iphoyisa elisencane elivela eBarcelona. eminyakeni emine eyedlule, obamba inhloso yokuxazulula leli cala. Ngendlela efanayo, ungumfundi okhuthele onempilo ejabulisayo yansuku zonke njengomyeni waselabhulali yedolobha nobaba wentombazane, uCosette (ofana nendodakazi kaJean Valjean, ophambili weLes Miserables, inoveli yakhe ayithandayo). Kodwa-ke, ngaphansi kwalokho kuthula okusobala ufihla okwedlule okumnyama okumguqule waba yinganekwane yomzimba.
Ukucaciswa kwalaba babulali kubangela uchungechunge lwemicimbi enamandla, engalindelekile futhi egcwele abantu abadumile. Impikiswano iqukethe ukucaca okucacile ekuhlolweni komthetho, ukungabi nabulungiswa kwezobulungiswa futhi uma ngabe kukhona uhlaka olwamukelekayo ngokokuziphatha lokuthethelela ukuziphindisela.
UJavier Cercas (Ibahernando, Cáceres, Spain 1962) ungumbhali omkhulu. Ubhale umsebenzi ohumushelwe ezilimini ezingaphezu kwamashumi amathathu futhi usungule namanoveli awine imiklomelo kuzwelonke nakwamanye amazwe, phakathi kwawo okukhona Iselula, isisu somkhomo, Amasosha aseSalamis, i-Anatomy yesikhashana, Imithetho yomngcele y Umkhohlisi.
Ngokunjalo ukhiphe izincwadi ezahlukahlukene -Isikhathi esihle, Izindaba Eziyiqiniso, Iqiniso Lika-Agamemnon y Izindlela zokucasha- kanye nama-eseyi (Umsebenzi wokubhala kaGonzalo Suárez y Indawo eyimpumputhe).
Ngokwengeziwe, uklonyeliswe ngemiklomelo ehlukahlukene yama-eseyi, ubuntatheli nomsebenzi wakhe wobungcweti njenge-Prix Ulysse (France), i-Premio Internazionale del Salone del Libro di Torino, i-Premio Friuladria, i-Premio Internazionale Città di Vigevano, noma i-Premio Sicilia, lezi ezine zokugcina e-Italy.
Ikhava Hard: I-384 páginas
Umhleli: I-Planeta yokuhlela
Uhlelo: 1 (Novemba 5, 2019)
Ungayithenga lapha: I-Terra ephakeme
Ubuso basenyakatho benhliziyo (Áncora & Delfin) nguDolores Aredondo
Ubuso basenyakatho benhliziyo.
Le ncwadi iyisandulela se- I-Baztán trilogy. Kubuyela emuva ku-Agasti 2005. Konke kwenzeka ngaphambi kokubulawa kwabantu okwazamazamisa isigodi saseBaztán. Kulesi sikhathi, u-Amaia Salazar, XNUMX, oyisekela lomhloli wamaphoyisa esifundazwe, use-United States ebamba iqhaza esifundweni sokushintshana phakathi kwe-Europol ne-FBI. Lolu qeqesho lunikezwa ngu-Aloisius Dupree, inhloko yophiko oluphenya. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi Amaia angenye ye- abalingiswa abadume kakhulu bohlobo lwenoveli yobugebengu.
Esinye sezivivinyo sidinga ukuxazululwa kwecala langempela lombulali obulalayo obizwa ngokuthi "umqambi." Indlela yokusebenza yalesi sigilamkhuba ukuhlasela yonke imindeni, ishiye izigcawu zobugebengu ezibukeka njengezinkambiso.
Ngokungalindelekile, uSalazar uba yilungu lethimba lophenyo elithuthela eNew Orleans.. Konke kwenzeka ngaphambi nje kwesiphepho esibi kunazo zonke emlandweni waso ukuze kulindelwe umbulali. Ngemuva kwalokho, ucingo oluvela kubabekazi wakhe u-Engrasi ovela ezweni laseBasque luzoletha izipoki zobuntwana buka-Amaia, amphoqe ukuthi abhekane nokwesaba kwakhe okujulile nezinkumbulo ezimnikeze ukuqonda okumangazayo ebusweni basenyakatho benhliziyo.
UDolores Redondo (IDonostia-San Sebastián, Spain, 1969) ungumsunguli walaba abahlonishwayo I-Baztán trilogy, isenzeko semibhalo esizuze abafundi abayizigidi nengxenye abangenamibandela. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi se-2016 uthole i-Planeta Award ye Konke lokhu ngizokunika khona.
Kuze kube manje, ifinyelele kwinani elihlaba umxhwele labashicileli abangama-36 abashicilele izihloko zalo. Hhayi ngeze, Umgcini ongabonakali —Isitolimende sokuqala se-trilogy— sashintshelwa kubhayisikobho ngo-2017 futhi izinguqulo zefilimu zeminye imiqulu emibili ye-trilogy zizokhishwa kungekudala: Ifa emathanjeni y Ukunikela esivunguvungwini, njenge Konke lokhu ngizokunika khona.
Ikhava Hard: I-688 páginas
Umhleli: Ama-Destino Editions
Uhlelo: 1 (Okthoba 1, 2019)
Iqoqo: I-Ancora & Delfin
Ungayithenga lapha: Ubuso basenyakatho benhliziyo
Ukususa ubugebengu obuhle ngokuphelele: 4 (Ayikho inganekwane)ngu-Mayka Navarro
Ukususa ubugebengu obuhle ngokuphelele.
Ngokuya ngobufakazi bangempela bamalungu eMossos d'Esquadra, lo msebenzi uchaza udaba luka-Ana María Páez Capital. Wayengowesifazane owabulawa endaweni yaseGràcia eBarcelona, ​​ogama lakhe lavela kutulo lokuyenga nokukhwabanisa kwamabhange okwenziwa nguMaría Ángeles Molina Fernández, "Angi", owathatha umngani owabulawa ukuze enze izenzo zakhe ezimbi.
Ngemuva kwezinyanga eziningi kwenziwe uphenyo olunzulu futhi oluphelele, amaphoyisa akwazile ukuqeda "ubugebengu obugcwele" ihlelwe nguMolina Fernández. Ukulandisa kwenziwa yintatheli eyashicilela izehlakalo zangempela zophenyo futhi yayizobekwa icala yijaji eliphethe leli cala.
UMayka Navarro (Badalona, ​​Spain, Julayi 1968) yintatheli esebenze emithonjeni ehlukene yokuphrinta njengoba Iphephandaba laseCatalonia y La Vanguardia. Ubambe iqhaza nasezindabeni ezibukhoma ngezinhlelo zethelevishini kuTele 5 nakuTV3, naku- Isuplement weCatalunya Ràdio.
Ikhava ethambile: I-312 páginas
Uhlelo: 1 (Septhemba 30, 2019)
Ungayithenga lapha: Ukususa ubugebengu obuhle ngokuphelele
Ama-Valkyries: Amadodakazi aseNyakatho (Izindaba Ezingokomlando) zika-Iñaki Biggi
Ama-Valkyries: amadodakazi aseNyakatho.
Unyaka ka-859 AD, uSeville wazibonela ngawakhe imizamo yokuphangwa kwemikhumbi yamaViking engayifinyeleli inhloso yayo. Ngenxa yalokho, amabutho asenyakatho athunjwa ngumbusi wedolobha, ofuna isihlengo esikhulu kakhulu ukuze bakhululwe. Lapho izindaba zifika lapho abahlaseli behlala khona, abesifazane bathatha isinqumo sokuqasha idlanzana lamasosha ukubaqeqesha ngobuciko bokulwa.
Ngemuva konyaka wokuqeqeshwa, umsebenzi wokutakula obonakala ungenakwenzeka wabantu bakubo uqala. Naphezu kwezehlakalo eziningi ezingalindelekile nezingqinamba ezenzeke ekuqaleni komkhankaso, amaqhawe akwazi ukufinyelela enhlokodolobha yase-Andalusian. Kule noveli, umbhali ukhombisa ikhono lokulandisa elihle kakhulu ukukhombisa uhlangothi lomuntu, olunesibindi nolwesabekayo ngempucuko ekhanyayo.
Indlela engcono kakhulu yokwazi nge-Iñaki Biggi, ukufunda le ngxoxo.
Ikhava Hard: I-576 páginas
Umhleli: I-Editora y Distribuidora Hispano Americana, SA
Uhlelo: 1 (Ephreli 23, 2018)
Iqoqo: Ukulandisa Okungokomlando
Ungayithenga lapha: Ama-Valkyries: Amadodakazi aseNyakatho
Ama-Aeon ayinqaba (Ukuqwasha) ngu-Emilio Bueso
Nakulokhu futhi, u-Emilio Bueso uhlaba umxhwele ngendaba ephazamisayo njengoba ilutha. Kulo msebenzi kunetulo lokucekela phansi umhlaba ngokuya ngeziphrofetho zeCthulhu Mythos. Lolu zungu luholela ekuhlanganeni kokhiye wesiliva ocashile eBarcelona, ​​emzileni wemoto onqamula umkhawulo wesizathu nokuhlangana namashwa amahlanu angazishiyi phansi lapho kukhona izinxushunxushu nokubhujiswa kokugcina. Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, ekuthuthukisweni kwendaba kunemidwebo eminingi esabekayo efezwe kahle kakhulu, egcwele izithombe ezishaqisayo.
Wazalelwa eCastellón, eSpain, ngo-1974, u-Emilio Bueso ungunjiniyela wezinhlelo Yiba umbhali owaziwa ngobuqiniso bakhe obungcolile kanye nokulandisa okuluhlaza kwamanoveli akhe asabekayo. Izincwadi zakhe zisukela ezindabeni ezijwayelekile zesipoko (Kuvaliwe ebusuku, 2007), kudlula umbono mayelana ne-apocalypse ngaphandle kwamafutha ezimbiwa (IZenith, 2012), kwisimangaliso sesitayela sebhayoloji sendalo esentshonalanga (Namuhla kusihlwa izulu lizovutha, 2013), phakathi kwabanye.
Ikhava Hard: I-288 páginas
Uhlelo: 1 (Meyi 7, 2014)
Ungayithenga lapha: Ama-Aeon ayinqaba
Injabulo ngu-Manuel Vilas: Umklomelo wokugcina we-2019 Planeta Award
Kule ncwadi, umbhali usimema ukuba sicabange ngeqhaza lomuntu ngamunye esizukulwaneni sakhe nasenkumbulweni yesizwe.. Isakhiwo sigxile ekucaciseni inkinga ebangelwe yimpumelelo ebonakalayo yangaphandle edalwe wudumo, ngokungafani nesizungu sangaphakathi nokufuna iqiniso langaphakathi.
I-protagonist ibhekana nezimo ezahlukahlukene njengokushona kwabazali bayo, isehlukaniso kanye nokuzivumelanisa nokuhlala nowesifazane omusha. Lezi zimo zimqhubela ekuqondeni ukubaluleka okuyisisekelo kwezingane zakhe empilweni yakhe. Ekuthuthukisweni kwemicimbi, ubuqotho kuwe nakwabanye kubonakala njengemfanelo ebaluleke kakhulu yokufisa ukuthola injabulo.
UManuel Vilas (uBarbastro, eSpain, 1962) uthweswe iziqu e-University of Zaragoza ngeziqu ze-Hispanic Philology. Indalo yakhe yezinkondlo ifaka nezincwadi ezaziwayo, esingabala phakathi kwazo Isibhakabhaka (2000), Ikhalori (2008) futhi Goqa (2015), phakathi kokunye; Ngokufanayo, emsebenzini wakhe wokulandisa, iziqu ezinjengezi España (2008), Okungafi y Obhejane abayizigidi ezingamakhulu ayisikhombisa (2015).
Ngokufanayo, uVilas ungumnikeli ojwayelekile ku- I-Herald yase-Aragon, Izwe, La Vanguardia, El País y ABC. Isici sokuphila komuntu nesicindezelekile yisici esivamile semibhalo yakhe, kanye nezindikimba ezikhona njengokuhamba kwesikhathi, ukwamukelwa kokulahlekelwa noma isizungu.
Ikhava Hard:I-360 páginas
Ungayithenga lapha: Injabulo
Amadodakazi kaKaputeni ngu-María Dueñas (Library yeMaría Dueñas)
Lesi sakhiwo simayelana nezimpilo zodade abathathu abaneminyaka engamashumi amabili abanesimo esinamandla (UVictoria, uMona noLuz Arenas). Kumele balwe phakathi kwamabhilidi amakhulu, izingqinamba, abantu bakuleli kanye nezinto abazithandayo ukufeza amaphupho abo eNew York. Amantombazane afika kuleli dolobha elikhulu ngonyaka we-1936 evela eSpain ephoqwe ngubaba wawo, u-El Capitan, okumele abhekane nezinkantolo ngenkathi exazulula ukuqoqwa kwesinxephezelo samanzi ngemuva kokushona ngengozi kuka-Emilio Arenas, umqashi wakhe ongaphuthi.
UMaría Dueñas uzwakalisa kule ncwadi ethinta inhliziyo futhi efundeka kalula izimo ezinzima ezazibandakanyeka ekubeni yisifiki. Lokhu, ngoba cishe njalo kudinga umthamo omkhulu wokuzimisela ukushiya i-adventure enezimpawu ezinhle kakhulu nekusasa elingaqinisekile. Umbhali ubuye ahloniphe isibindi sabesifazane okumele babhekane nobunzima phakathi kwezimo ezingezinhle.
UMaría Dueñas wazalwa ngo-1964 ePuertollano, eCiudad Real. Uthole iziqu zobudokotela kwi-English Philology futhi ngemuva kokuchitha amashumi amabili eminyaka eqeda ukuqeqeshwa kwakhe, washicilela Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi (2009), inoveli ezuze impumelelo enkulu yokuhlela, yaze yaguqulelwa ithelevishini ngu-Antena 3, yaba yimpumelelo yababukeli futhi yathola imiklomelo eminingi.
Kamuva, uqhubeke nokuthola ukufundwa nokugxekwa okuhle ngemibhalo Might Khohlwa (2012) futhi Ubumnene (2015). Amadodakazi kaKaputeni yinoveli yakhe yakamuva, eyesine. Sekukonke, imisebenzi ka-Dueñas isihunyushelwe ezilimini ezingaphezu kwezingama-35 kanti izigidi zakhe zemibhalo zidayise ukuthi ungomunye wababhali abathandwayo eSpain naseLatin America.
Ikhava ethambile: I-624 páginas
Uhlelo: 01 (Julayi 2, 2019)
Iqoqo: UMtapo Wezincwadi kaMaria Dueñas
Ungayithenga lapha: Amadodakazi kaKaputeni
Ngelinye ilanga namuhla ngu-Ángela Becerra: Umklomelo we-2019 Fernando Lara Novel
Ngelinye ilanga, namuhla.
UBati Sheba uyingane e-bastard ezalwe ngobusuku obunesiphepho ezindaweni ezinodaka. Yize enakho konke okuphikisana naye, ubusisiwe ngamandla abesifazane njengokudinga noma yiziphi izithiyo eziza kuye. Bayamazi ngokuxhumeka kwakhe okungenakugqashuka neCapitolina, intombazane ecebile ngeshwa eba ngudadewabo wobisi namehlo avuthayo omazibuthe wayo ongaqapheli.
Ngelinye ilanga namuhla kusekelwe esenzakalweni sangempela esenzeka eColombia phakathi no-1920, lapho uBetsabé Espinal, intombazane eneminyaka engamashumi amabili nantathu yobudala ebushushwini, ithatha ubuholi obuqhawe kwesinye seziteleka zokuqala zabesifazane eziqoshiwe. Kule ncwadi, umbhali uhlonipha ubungane obungenacala futhi wethula indaba emangazayo yombuthano wothando owawuzungeze abalingisi bawo.
U-langela Becerra ungowokuzalwa eCali, eColombia; Edolobheni lakubo wafunda ezokuxhumana. Waba yiphini likamongameli wezobuciko kwelinye lama-ejensi avelele eSpain, nokho, ngo-2000 wanquma ukushiya umsebenzi wakhe ophumelelayo ukuze abe umbhali, intshisekelo yakhe yangempela.
Ngemuva konyaka kwaba nokwethulwa kwe- Vula umphefumulo, iqoqo eliphakeme lezinkondlo ezikhuluma ngezinkinga ezenzeka ngesikhathi sokuvuthwa kwabantu. Inoveli yakhe yokuqala, Kwezothando zaliwe (2003), wamzuzela i-Latin Latin Literary Award ka-2004 kwiChicago Book Fair, kanye nokubuyekezwa okuhle ngabagxeki abakhethekile nokwamukelwa okumangazayo kwabafundi baseLatin American.
Waphinda lo mklomelo ngo-2006 kanye ne-2005 Azorín Novel Award kanye ne-2005 Best Colombian Fiction Book Award nge Iphupho lokugcina (2005), ukushicilelwa kokuzinikezela kwakhe okucacile njengombhali wamanoveli. Phakathi neminyaka elandelayo waqedela ezinye izincwadi ezaziwayo, phakathi kwazo okukhona Isikhathi esishodayo (2007), Yena owayenakho konke (2009) y Imemori yesikorokoro esine-soled eyisikhombisa (2013).
Ikhava Hard: I-816 páginas
Umhleli: I-Planeta Yokuhlela (Meyi 21, 2019)
Iqoqo: Abalobi baseSpain nabase-Ibero-American
Ungayithenga lapha: Ngelinye ilanga namuhla
Ayibonakali ngu-Eloy Moreno (Ink Cloud)
Yincwadi eyethulwe kakhulu. Ihlaziya ukuphikisana okwenziwe ngesikhathi sobuntwana yizimo zemicabango ezahlukahlukene ezingaholela noma ngubani ukuthi afune ukunyamalala lapho ezwa ukuthi ubonwa ngabanye bese eya kokunye ngokweqile kokufuna ukubonwa lapho ezwa engaziwa. Kumfundi kunzima kakhulu ukuthi kungabonakali kunoma yiziphi izingxenye zombhalo.
U-Eloy Moreno (Castellón, Spain, 1976) ugqame njengombhali selokhu kwashicilelwa yena Ipeni lejeli eliluhlaza okotshani —Incwadi yakhe yokuqala— isihloko esidlula amayunithi angama-200.000 athengisiwe. Umbhali wayazi ukuthi angagcina kanjani izinga lekhwalithi, ingwegwe kubalandeli bakhe nedumela lakhe phakathi kwabagxeki bemibhalo ngokukhishwa kwakhe okulandelayo: Engikuthole ngaphansi kukasofa (2013), Isipho (2015), Ayibonakali (2018) futhi Izindaba zokuqonda umhlaba (uchungechunge lwamavolumu amathathu, kuze kube manje, aqala ngonyaka we-2015), lesi samuva siqondiswe emphakathini jikelele, yize ukufundwa kwaso kufakiwe ezikhungweni zemfundo eziningana.
Ikhava ethambile: I-304 páginas
Umhleli: I-Ink Cloud
Uhlelo: 001 (Februwari 1, 2018)
Iqoqo: I-Ink Cloud
Ungayithenga lapha: Ayibonakali
Ihlathi liyalazi igama lakho ngu-Alaitz Laceaga (Amanoveli Amakhulu)
Ihlathi liyalazi igama lakho.
Indaba equkethe zonke izinto zokufunda okujabulisayo: uthando, uzungu, umona, ubuhlungu nokuziphindiselela. Itholakala ekupheleni kweminyaka yama-1920, lapho u-Estrella no-Alma (iwele lakhe) bephila ubukhazikhazi bempilo yezicukuthwane njengamadodakazi aseMarquises yaseZuloaga, umndeni onemayini yensimbi.
Kepha indlela yabo yokuphila kanokusho ifihla imfihlakalo ebakhathazayo: Ngenxa yesiqalekiso esingajwayelekile, omunye walab 'odade uzofa ngaphambi kosuku lwakhe lokuzalwa lweshumi nanhlanu. Kulo mongo, ukuthuthukiswa kwesakhiwo kuyaqala, okuzoholela ku-protagonist ukuthi azithathe njengowesifazane onesibindi nongenakulibaleka, ngaphandle kokunaka amakhodi ezenhlalo wokuziphatha okuvamile futhi ezimisele ngokuphelele ukuvikela ifa lomndeni wakhe.
Wazalelwa eBilbao ngo-1982, u-Alaitz Laceaga ungumlandeli othembekile wamanoveli ka-Victorian, ama-horror nochungechunge lomndeni. Umsebenzi wakhe wokubhala waqala ngokushicilelwa kwezindaba eziningi ezimfishane emakhasini e-Intanethi, kudlula ukuvakashelwa okungama-60.000 nemibono emihle eminingi. Ngenxa yalokho, wanquma ukukhiqiza amanoveli akhe okuqala (amukelwa kahle kakhulu ngumphakathi nabagxeki): Ihlathi liyalazi igama lakho y Amadodakazi omhlaba.
Ikhava Hard: I-632 páginas
Umhleli: B (Izinhlelo B)
Uhlelo: 001 (Meyi 24, 2018)
Iqoqo: Amanoveli amakhulu
Ungayithenga lapha: Ihlathi liyalazi igama lakho
Ngaphandle nguJesús Carrasco (NF Novela)
Sibhekene neqiniso lomhlaba wonke, umhlaba ungene shi kusomiso esinonya futhi lapho ukuphatha kabi uhulumeni kuyaziwa. I-protagonist yingane okufanele ithole indlela yokusinda ebudloveni obumangalisayo obudalwe yindlala efanayo nasekulahlekelweni kwamagugu umkhiqizo wokuwohloka okufanayo komphakathi.
Indaba iqala ngoshushiso lokuthi i-protagonist iyaphila, ngemuva kokubaleka kakhulu, kudwetshwa ithafa elidonsekela ekungenakunqotshwa. Yena, ezibona esaphila, unquma ukubhekana nomhlaba owomile, kuthi lapho esendleleni ahlangane nomelusi wembuzi oguqula inhlanhla nempilo yakhe unomphela.
UJesús Carrasco (Badajoz, 1972) ungumbhali okwazile ukuzimela emhlabeni wezincwadi emhlabeni jikelele ekuqaleni kwakhe no Ngaphandle (2013). IMadrid Booksellers Guild ayiphuthanga ngomsebenzi, futhi yawunika umklomelo weNcwadi Yonyaka, ingasaphathwa eye-Prix Ulysse yeBest First Novel neminye imiklomelo eminingi. Njengamanje umbhali uhlala eSeville, lapho aqhubeka khona nomsebenzi wakhe.
Ikhava ethambile: I-224 páginas
Umhleli: Iplanethi (Okthoba 29, 2019)
Iqoqo: Inoveli yeNF
Ungayithenga lapha: Ngaphandle
Isiphithiphithi osishiya nguCarlos Montero: Umklomelo Wenoveli Yentwasahlobo ka-2016
Le ndaba isibeka ezicathulweni zikaRaquel, owesifazane ojwayelekile, uthisha wezincwadi, okufanele asuke endaweni yakhe yokusebenza aye e-Ourense ukumboza ukungabikho kukazakwabo. Uhamba nomyeni wakhe, okuthi, ngenxa yalokho, aqhamuke kuleyo ndawo.
Konke kujwayelekile, kuze kube yilapho umuntu obefanele angene esikhundleni sakhe etholakala engenampilo. Konke kubonisa ukuthi kwaba ukuzibulala, kodwa uRaquel uyangabaza. Ngaphezu kwalokho, abafundi baqala ukumkhathaza, futhi umlingiswa omkhulu uqala ukuthola imiyalezo. Yonke imininingwane idala isimo esishubile nesisolisayo esenza izinwele zime.
Sibhekene nenye yamanoveli amahle kakhulu obugebengu ezikhathini zamuva.
UCarlos Montero (Orense, 1972) ungumbhali ovelele waseSpain, futhi ongumlobi wesikrini ovelele. Uneziqu zesayensi yolwazi evela e-UCM. Uyaziwa ngomsebenzi wakhe kulezi zingxenye ezimbili eshiwo ngenhla, noma kunjalo, usanda kuvela njengomqondisi naye Imali elula.
Imisebenzi yakhe njengombhali wesikrini ifaka phakathi UGenesise, Indlela yokuphila, futhi enye yezinto azifanekisela kakhulu I-Physics kanye ne-chemistry. Nge-Disorder You Leave, ubangele umthelela omuhle kubafundi bakhe, abangayeki ukwenza izibuyekezo kuwebhu mayelana nomsebenzi.
Ifomethi: Uhlobo lomusa
Usayizi wefayela: 796 KB
Ukuphrinta ubude: 398
Umhleli: I-Espasa (Mashi 22, 2016)
Kuthengiswe ngu: I-Amazon Media EU S.à rl
Ingathengwa lapha: Isiphithiphithi osishiya
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izincwadi ezinhle kakhulu zokunikeza lo Khisimusi